China, Yakasarudzika, Hunhu Ballerina tutu, Ballerina koshitomu, Ballet tutu, Adult ballet tutu, Pancake tutu koshitomu, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Fitdance ballet fekitori. - 3
nhema pancake tutu
Nhema Pancake Tutu ndeyeyeye yekutanga ballet performance tutu, ine "Black Heavy Metal" yekushongedza sechishongedzo. yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
Pancake tutu koshitomu
Iyo yekufemerwa dhizaini yePancake Tutu Costume inouya kubva kuâ € œPangolin Scalesâ €. Iyo ine: Rhinestones dzakapfuma! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakasarudzika minhenga dhizaini inoshandiswa; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
yakanaka ballet tutus
Iyo yekufemerwa dhizaini yeRakanaka Ballet Tutus kunobva - œNight Sceneryâ € .Iine: Pfuma rhinestones! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
chena pancake tutu
Iyo yekufemerwa dhizaini yeWhite Pancake Tutu kunobva â € œSnowflakesâ € .Iine: Pfuma rhinestones! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakagadzirwa nemachira ejasi, ichiita kuti muviri uratidzike kunge wakatsetseka, wakanaka uye wakanaka; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.